Tag: rss nri | Martech Zone
Kpido: nri RSS
Anyị ejiri Taboola na-akwalite ndị na-akwado anyị na ọdịnaya n'oge na-adịbeghị anya, nkwalite nkwalite gburugburu ebe a na-agụ ndepụta anyị yana isiokwu ha na akwụkwọ ndị ọzọ dị mkpa na webụ. Anyị nwere obi ụtọ na njikwa nwere oke na nkesa na ọnụọgụ kwa ndu site na mmemme - tinyere ndị ọrụ ha adịla mma. Anyị kwagara Taboola mgbe anyị jesịrị ọrụ ọzọ nke leghaara mmefu ego anyị anya wee chọọ ka anyị kwụọ $ 10,000
Ọ bụ ezie na ụmụ mmadụ nwere ike ịlele HTML, iji nweta nyiwe ngwanrọ iji rie ọdịnaya, ọ ga-adị n'ụdị enwere ike ịgụta ya. Usoro nke ọkọlọtọ dị n'ịntanetị bụ RSS na mgbe ị na-ebipụta akwụkwọ ọhụụ gị n'ụdị a, akpọrọ ndepụta gị. Site na ikpo okwu dị ka WordPress, a na-emepụta ndepụta gị na akpaghị aka ị gaghị eme ihe ọ bụla. Were ya na ị nwere ike wepu ihe niile eji mepụta saịtị gị ma na-eri nri
Site na nchọgharị nke ihe nchọgharị ọhụrụ, enweghị m nchegbu ọ bụla gbasara itinye njikọ RSS m n'ime ọdịnaya saịtị m. Ana m amalite ichegharị nke ahụ. Ọ bụrụ na ịmabeghị mbụ, ihe nchọgharị ọhụrụ a nwere ike ịchọpụta ndepụta RSS na-akpaghị aka ọ bụrụhaala na achọpụta ya n'ime nkụnye eji isi mee nke ibe ahụ. Na ịpị akara ngosi RSS na - ebute gị 'ịdenye aha na ndepụta ahụ' site na ihe nchọgharị gị. Ya mere, mgbe ị họrọ ndepụta na gị